Izizathu > Isifo Sikashukela Sokunqoba!
Umdlavuza we-pancreatic kanye nesifo sikashukela: buyini ubudlelwano?
Yiziphi izifo ze-pancreas ezibangela isifo sikashukela? I-pancreas iyisitho esikhiqiza i-insulin futhi esidlala indima ebalulekile kulawula amazinga kashukela egazini. ...
Ukwanda kwezimpawu zoshukela
Ungalapha kanjani ushukela wegazi ophezulu. ...
Isifo Sikashukela Somnandi
Impilo ngaphandle kwamaswidi nezinye izinganekwane mayelana nesifo sikashukela ngoNovemba 14 lusuku lweSifo Sikashukela soMhlaba. ...
Izimbangela nezimpawu zesifo sikashukela kubantu abadala
Izimpawu ezinkulu zesifo sikashukela I-International Diabetes Federation ibika ukuthi namhlanje babalelwa ezigidini ezingama-366 abantu abaguliswa yisifo sikashukela emhlabeni, kanti ingxenye yabo ayisazi nhlobo isifo sayo. ...
Izimbangela zesifo sikashukela kwabesifazane Ukuze ushukela wegazi ubuyiselwe kokujwayelekile, udinga ukudla isipuni esisodwa ekuseni ngesisu esingenalutho. ...
Izimpawu eziyi-12 eziphambili zesifo sikashukela emadodeni
Izimbangela zesifo sikashukela emadodeni Ukuze ushukela wegazi ubuyiselwe kokujwayelekile, udinga ukudla isipuni esisodwa ekuseni ngesisu esingenalutho. ...
Izimpawu ezi-8 zokuqunjelwa ushukela
Ukuqagela kofuzo kusifo sikashukela Amathuba okuthola isifo sikashukela ngokuzayo anganqunywa yizici ezithile kanye nenqubo. ...
Izimbangela eziphambili zesifo sikashukela
Yini ebangela isifo sikashukela? Ukubuka konke kwezimbangela eziphambili nezengozi Isifo sikashukela yisifo esihambisana nokwanda kokuhlushwa kashukela egazini. ...
Izici Ezingozini Zesifo Sikashukela sohlobo 2
Izici ezibalulekile eziyi-12 zokuthuthukisa uhlobo lwe-1 kanye nohlobo 2 lwesifo sikashukela Izimbangela zokuqalwa kanye nokukhula kwesifo sikashukela cishe akunakwenzeka ukuzazi. Ngakho-ke, kulungile ukukhuluma ngezinto zobungozi zohlobo 1 nesifo sikashukela sohlobo 2. ...
Isifo sikashukela i-mellitus siyatheleleka noma cha. Ekudla kwansuku zonke kwengane kufanele okungenani kudluliselwe, amajikijolo nemifino. Dinga ukuhamba kwenaliti kashukela omusha. ...
Isifo sikashukela ezinganeni: ungayivikela kanjani ingane ekuguleni?
Isifo sikashukela ezinganeni: okudingwa abazali ukuthi bazi Isifo sikashukela yisifo lapho kukhuphuka khona njalo ushukela wegazi. Isifo sikashukela siba phakathi kwezifo ze-endocrine ezithinta izingane. ...
Louise Hay noSinelnikov - psychosomatics of Type 1 and Type 2 sikashukela
I-Psychosomatics yesifo sikashukela Sikunikeza ukuthi ufunde i-athikili ngesihloko esithi: "psychosomatics sikashukela" ngamazwana abawasebenzisayo. Uma ufuna ukubuza umbuzo noma ukubhala imibono, ungakwenza lokhu kalula ngezansi, ngemuva kwendatshana. ...
Izimpawu kashukela wegazi ophezulu kwabesilisa: ukwelashwa
Ushukela ophezulu wegazi emadodeni imizuzu engu-9 Umbhali: I-Lyubov Dobretsova 1238 Izinga likashukela wegazi (kwezokwelapha - glycemia) libonisa isimo se-carbohydrate metabolism, kanye nezinga lokukhiqizwa kanye nokufakwa kwe-insulin ye-hormone. ...
Ngabe isifo sikashukela siyazuzwa njengefa?
Ngabe isifo sikashukela siyazuzwa njengefa? ...